INkosi uYesu iyeza kwakhona - Christian Literature Fund
By CLF	All, Pamphlets, Pamphlets for Congregations XHO177
INkosi uYesu iza kubuya, ngesi sihlandlu ukuza kugweba abahleliyo nabafileyo. Ukubuya okwesibini sisiphelo samaxa amathathu. Elokuqala lisusela kwixesha lendalo ukuya kuthi ga ekuzalweni koYesu Krestu. Libizwa ixesha likaThixo uBawo. Kulandela ukuzalwa kukaYesu ukuya kutsho ekuthululekeni kukaMoya oyiNgcwele ngePentekost. Eli lixa kuthiwa lixesha likaThixo uNyana. Ilixa lesithathu lisusela kwiPentekost yaye liza kuphela ngokubuya okwesibini. Eli xesha lona kuthiwa lelikaThixo uMoya oyiNgcwele. Ngawo onke omathathu la maxa uMtriniti oNgcwele uyasebenza. Kodwa ngaxesha ngalinye sinye isiqu kwezi Ziqu Zithathu zikaThixo esithi sigqame ngokucacileyo.
Siphila kwimihla yokugqibela? Ewe, ilixa lesibini (ixesha likaNyana) nelixa lesithathu (ixesha likaMoya oyiNgcwele) aqukwa ngelithi lixesha phakathi kwamaxesha kuba emi phakathi kokubuya okokuqala nokwesibini. Siphila kwelo xesha ke. IBhayibhile ibhekisa kweli xesha ezindaweni ezininzi njengemihla yokugqibela. Xa uMoya oyiNgcwele uthululwa ngentsasa yePentekost, umpostile uPetrosi uma phambi kwezihlwele emangalisiwe. Echukunyiswa nguMoya oyiNgcwele uthi kubo: Le nto yenzeka apha uThixo wayazisa kwiminyaka emininzi eyadlulayo ngomprofite uJoweli. Ngemihla yokugqibela uThixo uza kuthululela uMoya wakhe ebantwini bakhe bonke (iZenzo 2:16-21; Joweli 2:28-32). Umbhali weNcwadi yamaHebhere naye uthi: “Kwixesha elingaphambili uThixo wathetha noobawo bethu ngabaprofeti amatyeli amaninzi nangeendlela ezininzi. Kodwa kule mihla yokugqibela uthethe nathi ngoNyana wakhe.”
Kucacile ke ngoko okokuba, akukhathaliseki nokokuba le nto ithathe ithuba elide kangakanani na, siphila kwimihla yokugqibela. Kwiminyaka ebalelwa kumawaka amabini eyadlulayo umpostile uPetrosi kwangoko waba noxanduva lokusebenza nabantu abangenankathalo abanyevulela le ngcamango yokuza okwesibini ngelithi: Yonke into isahamba ngolwa hlobo ibihamba ngalo ukususela kwixesha lendalo. Hayi, kutsho uPetrosi, kanti ke iNkosi ayikulibazisi ukuza kwayo. Inomonde ngakuthi (nakwabo banyevulayo) kuba ayifuni mntu ulahlekayo, kodwa ifuna wonke umntu azililele izono zakhe. (2 Petrosi 3:3-9). Oku ngathi “kuyacotha” kokuza okwesibini kubonakalisa uthando lobuthixo. Ngumonde wobuthixo ofuna ukunika wonke umntu ithuba lokusindiswa (2 Petrosi 3:15).
Ewe, ngokuqinisekileyo iNkosi iza kufika ingalindelwanga! Ukuza koNyana woMntu kuza kukhawuleza oku kombane, utsho uYesu. Akukho mntu waziyo okokuba uza kubuya nini. Neengelosi ngokunokwazo emazulwini azazi. Kanti noNyana ngokunokwakhe akazi. NguBawo kuphela owaziyo okokuba kuza kuba kunini. (Matewu 24:27,36). Yiyo loo nto iNkosi uYesu isilumkisa ngokusebenzisa imizekeliso efana nalowo weentombi ezilishumi okokuba sihlale siyilungele imeko, kuba asilazi ixesha lokuza kwayo okwesibini (Matewu 25:1-13).
Umpostile uPawulosi waxelela ibandla laseTesalonika okokuba lazi kakuhle ukuba iNkosi iza kufika ngesiquphe oku kwesela ebusuku (1 Tesalonika 5:2). Ngenxa yoko, ngelishwa abanye bafikelela kwisigqibo sokuba iNkosi sele ifikile, yaye bangayeka ukusebenza. Yiyo loo nto uPawulosi ebhala incwadi yesibini elumkisa ngalo mcamango. Ukuza kungalindelwanga akuthethi kuthi kusondele kakhulu (2 Tesalonika 2:2). Masisebenze, silandele umzekelo kaPawulosi nasebenza nabo. Makungabikho mntu uhleli nje okanye ozinyokonyela emicimbini yabanye, njengoko kungathi kunjalo. Ongafuni kusebenza makangatyi kananjalo (2 Tesalonika 3:6-12). Masithi gqolo sisebenze, yaye silinde ukuza kweNkosi kuba singazi okokuba oko kuza kwenzeka nini.
Baphi bonke abantu abasele bebhubhile, yaye baza kuyaphi abo baseza kubhubha phambi kokuba iNkosi ibuye? Le ndawo kuthiwa ngummandla wababhubhileyo (i-sjeol ngesiHebhere, i-hades ngesiGrike). Le yindawo yokufa, utshaba lokugqibela lukaThixo. Sele yoyisiwe ngokufa nokuvuka kukaYesu (1 Korinte 15:26; Izityhilelo 1:17-18). Umzimba wasemhlabeni ubuyela eluthulini okanye eluthuthwini. Kodwa kwenzeka ntoni emphefumlweni? IBhayibhile isinika ulwazi oluncinane kakhulu ngalo mba. Umzekelo: Asinakusebenzisa umzekeliso wesityebi noLazaro ukuqashela ngalo mba (Luka 16:19-31). Kwimizekeliso luluvo oluphambili kuphela olubalulekileyo, yaye lo mzekeliso uthetha ngokupha kwabantu abanezinto besipha abo bangenazo phakathi kwethu. Mhlawumbi sisenokwenzeka isigqibo ngalo mzekeliso sokuba bonke abaza kubhubha phambi kokuza okwesibini baza kukrotyiswa kwinto ebalindileyo emva komgwebo wokugqibela.
Eyona nkcazo igcweleyo ngento elinde amakholwa emva kokubhubha yile: baza kuba noKrestu. UYesu uqinisekisa omnye wabaphuli-mthetho osecaleni kwakhe ukuba uza kuba noYesu eparadesi kwangalo suku lunye (Luka 23:43). Kwelakhe icala uPawulosi ubhala athi ulangazelela ukuhamba abe kunye noKrestu. (kwabaseFilipi 1:23)
Uqobo lokuza okwesibini
Maxawambi amaKrestu akavumelani ngendlela iza kubuya ngayo iNkosi. Umzekelo, abanye bathi uza kubuya ngesiquphe athathe loo makholwa akulungeleyo nyhani ngokufihlakeleyo. Abo bashiyekayo baza kuhlungiseka kakhulu. Ixesha elide emva koko iNkosi iza kubuya ngokubonakalayo, yaye ngesandi esikhulu samaxilongo iza kwenza ntsha yonke into. Lo mcamango ubonisa ukubuya okuntlantlu-mbini. ITestamente eNtsha kambe ithetha ngokubuya kanye. Eneneni ke iLizwi lisifundisa ntoni? Lithi,
Ukuza okwesibini kuza kuhamba neenguqu ezinkulu emazulwini (Matewu 24:29)
INkosi iza kubuya isemafini, inamandla nozuko olukhulu, ngesiquphe okwesela ebusuku okanye okombane ngelizwi lengelosi enkulu ibiza ngexilongo (Matewu 24:27,30, 1 Tesalonika 5:2, 1 Tesalonika 4:16).
Wonke umntu uza kuyibona iNkosi kubandakanywa nabo bayingcuthayo. Zonke izizwe nabantu baza kudana ngenxa yakhe (Izityhilelo 1:7; Matewu 24:30)
Iza kuthumela iingelosi zayo ngesandi sexilongo ngelithi maziqokelele abantwana bayo abakulo lonke ilizwe (Matewu 24:31). Abo babhubhele kuKrestu baza kuvuka kuqala bathathwe ngamafu kunye nabo baphila kuKrestu basiwe eNkosini apho baza kusoloko benayo (1Tesalonika 4:16-17).
NgokweBhayibhile ilizwe elizayo, oko kukuthi indawo nobume emva kokuza okwesibini kuqulethe izulu nesihogo.
Ku-1 Korinte 2:9 sifunda la mazwi, “Akukho liso likubonileyo, akukho ndlebe ikuvileyo, akukho ngqondo ikucingileyo oko uThixo akulungiselele abo bamthandayo.” Obu buqaqawuli bamazulu buchazwa ngemizobo eyahlukileyo yehlabathi. Amagama abathembekileyo abhalwe emazulwini yaye igama lakhe libhalwe emabunzini abo (Luka 10:20, Izityhilelo 22:4). Apho amalungisa aza kuqaqamba okwelanga (Matewu 13:43). Ngobuqaqawuli bemizimba eguqulwe imo (1Korinte 15:35-58) baza kubona uThixo njengoko enjalo ngenxa kaYesu Krestu (Matewu 5:8; Yohane 17:24, 1Yohane 3:2; Izityhileleo 22:4). Izicaka zakhe ziza kumkhonza, zamkele ilifa lazo yaye zilawule ngonaphakade (Izityhilelo 22:3, 5; Matewu 25:34). Bekunye noKrestu baza kwabelana emsithweni ebukumkanini bukaYise (Matewu 26:29).
UYohane ilizwe elizayo ulichaza njengezulu elitsha nehlabathi elitsha elineYerusaleme entsha negadi engummangaliso ehla ivela emazulwini (Izityhilelo 21:1-22:5). Apha kukho umlambo wamanzi obomi nomthi wobomi oneziqhamo unyaka wonke nomagqabi awo aza kuphilisa izizwe (Izityhilelo 22:1-2). Akusayi kubakho lunxano, nkathazo, ludano, kugula, zingozi, kufa okanye siqalekiso. UThixo neMvana kukukhanya okugxotha ubumnyama. Apha uThixo uhlala nabantu bakhe bomnqophiso abavela kuzo zonke izizwe. (Izityhilelo 21:3). Oku kukuzaliseka komnqophiso kaThixo noAbhrahama (Galati 3:8). Kweli lizwe lizayo uThixo uza kuba “nguye wonke” (1Korinte 15:28). Eli likhaya lobulungisa (2 Petros 3:13) apho uThixo athi, “Ndenza ntsha yonke into!” (Izityhilelo 21:5)
Umprofeti uDaniyeli uthi isihogo yindawo yehlazo nomsindo ongapheliyo (Daniyeli 12:2). ITestamente eNtsha isihogo isichaza ngeendlela ezahlukileyo. Yindawo yesibetho esingapheliyo (Matewu 25:46) apho kungekho kuphumla imini nobusuku (Izityhilelo 14:11). Yindawo yobumnyama apho kuza kubakho ukukhala nokutshixiza kwamazinyo (Matewu 25:30). Ngumlilo wanaphakade olungiselelwe umtyholi neengelosi zakhe (Matewu 25:41) apho umbungu ungafiyo nomlilo ungacimiyo (Marko 9:48). Le nkcazo yokugqibela ikhumbuza ngendawo yokulahla inkunkuma phandle kweJerusalema ngexesha labapostile apho kwakusoloko kukho umlilo ovuthayo nemibungu etya imizimba efileyo. UPawulosi unika le nkcazo yesihogo ilandelayo neshukumisa umzimba: apha kukho ukohlwaywa nokutshabalalisa okungapheliyo kunye nokungabalwa kubukho beNkosi nakubungangamsha bamandla ayo (2Tesalonika 1:9).
Ngenceba yayo enkulu iNkosi iyawenza umahluko ekuqineni kwesohlwayo phakathi kwabo benza besazi nabo benza bengazi (Luka 12:42-48). Iphinda yenze umahluko ngokwaloo nto yenziweyo, intle okanye imbi (2Korinte 5:10).
Iimpawu zokuza okwesibini
IBhayibhile yenza uluhlu lweempawu ezininzi zokuza okwesibini. Umzekelo: uYesu ubalula iimfazwe, amarhe eemfazwe, indlala, iinyikima (Matewu 24:6-7) nazo zonke iintlobo zezifo. Kwanokutshatyalaliswa kwetempile eJerusalema ngamaRoma ngonyaka we-AD 70 kubonwa kuyinxalenye yokuza okwesibini. Ngelo xesha amaJudeya enza oko uYesu wathi makakwenze kuMatewu 24:16-18 asaba emka eJerusalema naseJudeya. Ukuwa kweJerusalema kuphothene nokuza okwesibini kangangokuba akululanga ukwenza umahluko nyhani phakathi kwezi ziganeko zibini. Ngaloo ndlela ke iziganeko ezininzi eziphakathi kokuza kukaYesu okokuqala nokwesibini ziimpawu nezipili zokuza okwesibini.
Ookrestu bobuxoki nabaprofeti bobuxoki
Umpostile uPawulosi ulumkisa AmaTesalonika ngokuhendwa ngumchasi-krestu phantsi kwamandla kaSathana (2Tesalonika 2:7-12). Umbhali weZityhilelo ubona umchasi-krestu kweminye yemibono yakhe evela esisilwanyana siphuma elwandle (Izityhilelo 13:1-10). Umpostile uYohane uthi sebebaninzi abachasi-krestu abasele befikile ngexesha lakhe. (1 Yohane 2:18-22, 4:2-3). Kunjalo nasezimbalini. Cinga ngezikhohlakali ezinjengoStalin waseRashiya, uHitler waseJamani, uMao Zedong waseTshayina, uKim II Sung waseKoriya eseMantla noIdi Amin waseUganda. Kukwanjalo ke nakubaprofeti bobuxoki ababefundisa abantu izinto ezingalunganga ngoYesu. Ngeli lixa umbhali weZityhilelo ebona isilwanyana sivela ehlabathini sisenza abantu banqule umchasi-krestu (Izityhilelo 13:11-17), umpostile uYohane uthi baninzi abaprofeti bobuxoki abangene elizweni (1 Yohane 4:1). UYesu ngokunokwakhe usilumkisa ngookrestu bobuxoki nabaprofeti bobuxoki (Matewu 24:4-5, Matewu 24:23-24).
Nayiphi na intshutshiso engamandla yamaKrestu ngumqondiso wokuza okwesibini. UYesu uthi okokuba le mihla ibingacuthwanga akukho namnye obeza kuphila (Matewu 24:21-22). Kodwa ke iNkosi ikwathi ukuza okwesibini kuza kwenzeka ngexesha elifana nelikaNowa, kanye phambi kwempuphuma. Abantu babesitya, besela, betshata ukuya kuthi ga ngexesha lentlekele (Matewu 24:38-39). Umcamango apha ngowabantu abaphila ngaphandle kweNkosi, abaphila ngokwesiqhelo semihla ngemihla bengalindelanga kuza kwayo.
Umqondiso obalulekileyo wokuza okwesibini kukushunyayelwa kwevangeli kulo lonke ilizwe, kuzo zonke iintlanga phambi kokuba isiphelo sifike (Matewu 24:14). Ikholwa ngalinye linako yaye linyanzelekile ukuthabatha inxaxheba ngovuyo kulo mqondiso wokubuya okwesibini. Umzekelo: le nto ingenziwa ngomthandazo wakho onyanisekileyo ukuze umyalezo upapashwe elizweni lonke (Kolose 4:2-4); 2 Tesalonika 3:1), ngezenzo zakho zesisa nobulumko ekusebenzeni nabantu abangengomaKrestu (Kolosa 4:5-6) nangoncedo ngezinto eziphathekayo kunye nenkxaso kubefundisi nabakwenzayo (3 Yohane iivesi 5-8). Basikelelekile abaza kuxakeka ngolu hlobo xa iNkosi ibuya.
Silindele ngovuyo ukuza okwesibini
Icacile into yokuba uYesu uza kubuya. Le nto siyakholelwa kuyo yaye siyayivuma. Siyilindele ngomdla; lithemba lethu. Siyayithandazela ngethemba. Thina siyicawe oku komtshakazi ebiza umyeni sithi: Yiza! Simema nabanye: Yizani! Umsitho womtshato mawuqale khonukuze wonke onxaniweyo asele amanzi obomi afelefele! (Izityhilelo 22:17). Kule meko iNkosi uYesu iphendula ngelithi: “Ewe, ndiyeza kwakamsinyane.” (Izityhilelo 22: 20)